Al-shabaab oo ku goodisay Ineey weeraro ka geysan doonto Nairobi
Updated About:332 days ago 0
Madaxa ciidamada booliska magaalada Nairobi ee dalka Kenya Anthony Kibuchi ayaa sheegay ineey soo gaareen hanjabaadyo kaga imaanaya Al-shabaab kuwaasoo ku aadan in kooxda ay weeraro xoogan ka geysaneyso magaalada Nairobi inta lagu gudo jiro bishan barakeysan ee Ramadaanka.
“Kooxda argagixisada ee Al-shabaab ayaa nasoo gaarsiisay fariimo goodin ah oo ay ku sheegayaan ineey qaraxyo iyo weeraro culculus ka geysan doonaan magaalada Nairobi inta lagu gudo jiro bisha ramadaanka” sidaa waxaa yiri Anthony Kibuchi waxa uuna bulshada reer Nairobi ugu baaqay ineey digtoonaadaan.
Kadib markii uu weerarkan soo baxay ayaa waxaa aad loo adkeeyay ammaanka magaalooyinka Nairobi Iyo Mombasa sidookale waxaa ciidamo lasoo dhoobay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Kooxda Al-shabaab ayaa horay ugu goodisay ineey dhulka soo dhigi doonto daaraha dhaadheer ee kuyaala magaalada Nairobi kadib markii ay ciidamada milatariga Kenya gudaha usoo galeen Soomaaliya bishii October ee sanadkii hore kadib markii ay Al-shabaab weeraro iyo afduubyo ka geysteen Kenya.
Shirkad bareefad oo kashaqeyso dhinaca ammaanka oo lagu magacaabo IntelCenter fadhigeeduna yahay dalka mareeykanka ayaa horay ugu digtay Kenya,digniinta ayaa ku saabsaneyd in kooxda Al-shabaab ay qorsheyneyso weeraro ay ka geysato gudaha dalkaas.
Goodinta Al-shabab ayaa kusoo aadeeysa laba isbuuc kadib weerar 28-ka bishii hore kadhacay dhismo lagu iibiyo dharka kuna yaal magaalada Nairobi, waxaana ku dhintay weerarkaas hal ruux 30 kalena dhaawac ayaa kasoo gaarayu.
Kooxda falaagada Al-shabaab ayaa weeraro is xigxigay kageystay magaalada Nairobi ee xaruunta dalka Kenya, weeraradaas ayaa badanaa waxay adeegsanayeen Bamka laga tuuro gacanta kuwaasoo bilaw u ah weeraro iyo qaraxyo xoogan oo ay mustaqbalka geysan karaan.
Arbacadii lasoo dhaafay weerar kadhacay magaalada Wajeer waxaa ku dhaawacmay 4-ruux, weerarkaas oo loo adeegsaday Bam-ka gacanta laga tuuro.
Weeraradii ugu xumaa ayaa waxay gadhaceen Magaalada Garissa, kadib markii kooxo kuhubeysan ay 3 isbuuc kahor weerar ku qaadeen 2 kaniisadood oo halkaas ku yaal waxaana ku dhintay dad kor udhaafaya ilaa 18 ruux 60 kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray.
Isniintii lasoo dhaafay kooxo loo maleenayo ineey kamid yihiin Al-shaabab ayaa waxay magaalada Lagdera kudileen sarkaal katirsan ciidamada booliska sidookale waxaa ay dhaawac soo gaarsiiyeen saaxiibkiis oo lasocday.